Articles tagged 'chidyausiku'
MDC wants referendum on Chief Justice Bill 12 June 2017 HARARE - Government must conduct a referendum on the proposed Constitution of Zimbabwe Amendment (No. 1) Bill, and the fate of the proposed constitutional reform must hinge on the public verdict, an opposition legislator has told the National Assembly. Bulawayo South MDC MP Eddie Cross told th...
Chidyausiku defended land reform — Mugabe 14 May 2017 HARARE - President Robert Mugabe yesterday hailed the late retired Chief Justice Godfrey Chidyausiku for ruling that the government may acquire land and agriculture equipment seized from white-owned farms. He told mourners at the burial of Chidyausiku at the Heroes' Acre — a national shrine in...
Con-Court throws out Mujuru's bond notes case 16 February 2017 HARARE - The Constitutional Court (Con-Court) yesterday struck off the roll former Vice President Joice Mujuru's challenge against the introduction of the bond notes which she argued was unconstitutional. She challenged the legality of a presidential pronouncement that provided a legal framewo...
'Constitution change a claw-back move' 13 January 2017 HARARE - Government is under renewed pressure for trying to illegally amend the Constitution, with the Law Society of Zimbabwe (LSZ) slamming the attempt as a move to reinstate President Robert Mugabe's sole discretion of appointing the Chief Justice (CJ). This comes as government is seeking t...
Zanu PF fights over new Chief Justice 31 December 2016 HARARE - The ruling Zanu PF is deeply divided over proposed constitutional amendments seeking to reinstate President Robert Mugabe's sole power to unilaterally appoint a new Chief Justice (CJ). While lapdog State media yesterday claimed ruling party MPs were fully behind the envisaged amendmen...
Constitution change draws outrage 27 December 2016 HARARE - President Robert Mugabe has sparked outrage after unilaterally changing the new Constitution, reinstating his sweeping powers to appoint the Chief Justice and slamming shut any thoughts of progressive reform of judicial institutional independence. This comes after the Judicial Service...
New chief justice search put on ice 12 December 2016 HARARE - The hunt for Zimbabwe's new chief justice has been put on ice after the High Court suspended today's scheduled public interviews yesterday. The chamber ruling followed the recent urgent court application by a University of Zimbabwe law student, Romeo Zibani, who queried the process to...
Zanu PF factions brawl over new chief justice 11 December 2016 HARARE - Zanu PF's seemingly unstoppable tribal, factional and succession and wars are having a debilitating effect on government operations, with the deadly fights now also getting in the way of the appointment of a new chief justice for the country to replace the retiring long-serving incumbent...
Chidyausiku is spot on 30 October 2015 HARARE - Chief Justice Godfrey Chidyausiku and his entire bench who on Wednesday slapped Prosecutor-General Johannes Tomana with a 30-day prison sentence for disobeying court orders should be commended for a job well done as their judgment not only cements confidence in the judiciary but victims ...
Con-Court upholds corporal punishment 18 June 2015 HARARE - The Constitutional Court (Con-Court) has said corporal punishment against juveniles in criminal matters remains in force. This comes after High Court judge Esther Muremba early this year delivered a ruling declaring corporal punishment unconstitutional, adding that the offenders shoul...
Con-Court orders fresh Mwonzora trial 12 June 2014 HARARE - MDC spokesperson Douglas Mwonzora is facing a fresh trial following a 2011 political violence case in Nyanga after the Constitutional Court dismissed his application for stay of prosecution. Mwonzora is being charged together with 49 other MDC members, whose names were not given in co...
Mugabe vs the world 5 July 2013 HARARE – The decision by the Constitutional Court on Thursday to dismiss the application to have poll dates extended beyond the end of this month means the battle of the political titans, Zanu PF and the MDC, is now truly on. Elections are now set for July 31 as proclaimed by President Robert ...
Elections on July 31 - Court 4 July 2013 HARARE - Chief Justice Godfrey Chidyausiku on Thursday ruled that elections should proceed on July 31. In a unanimous decision by a panel of nine Constitutional Court judges, Chidyausiku dismissed Prime Minister Morgan Tsvangirai's application, which had been consolidated with that of Welshman...